सरकारी विदामा कटौती, कुन-कुन सार्वजनिक विदा काटिए ? (सूचीसहित) - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
सरकारी विदामा कटौती, कुन-कुन सार्वजनिक विदा काटिए ? (सूचीसहित)
29 March, 2018 12:59 pm
हरेक देशको राष्ट्रिय दिवस (नेशनल डे) भएजस्तै नेपालको पनि असोज ३ गते राष्ट्रिय दिवस कायम भएको छ ।
अब नेपालभर वर्षभरी ५२ वटा शनिबार र अन्य १६ दिन सार्वजनिक विदासहित राष्ट्रव्यापी रुपमा ६७ दिनमात्र विदा हुनेछ । अन्य पर्वहरुमा २२ दिन आंशिक विदा हुनेछ । -अनलाइनखबर